धूम्रपान - एक राम्रो बानी, र यति समय समयमा हरेक धूम्रपान चुरोट संग खिलवाड अन्त्य गर्न प्रयास गरिरहेको छ। धेरै agonizing घन्टा, शायद यो पनि चुरोट को धुवाँ बिना दिन, चकलेट को किलोग्राम, वास्तवमा, चुरोट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, तर सबै व्यर्थ। र धूम्रपान एक चुरोट लागि फेरि हुन गर्छन। र केवल केही चुरोट को धुवाँ को कैद बाहिर लिएको छन्।
आफै अन्तर्गत मात्र होइन शारीरिक, तर पनि मनोवैज्ञानिक आधार छ कि एक व्यवहार - यो कि धूम्रपान साबित भएको छ। तसर्थ, यो सामना गर्न विभिन्न तरिकामा आवश्यक छ। सबैभन्दा प्रभावकारी - दबाइ एजेन्ट सामान्यतया निकोटीन प्रतिस्थापन र बिस्तारै यो बानी बाहिर बढन छन् को प्रयोग हो। र, सत्य, धेरै धूम्रपान देखि प्याच प्रयोग धूम्रपान अन्त्य।
छाला थाले मार्फत पर्याप्त रकम मा मानव शरीर मा निकोटीन को प्रवेश गर्न योगदान गरेको विशेष पैच कहीं अन्तिम शताब्दीको 80s मा, चिकित्सा प्रयोग गर्न। सुरुमा तिनीहरू निर्धारण मा बेचिएको थियो, र त्यसपछि तिनीहरूले मुक्त बजार मा देखा पर्नुभयो। यस दबाइ, "Nikotroll", न्यूनतम औषधिको खुराक र अन्यको "Nicorette", "Nikoderm", "Nikotinell" को धेरै ब्रान्डहरु छन्।
धूम्रपान विरुद्ध प्याच अप मानव शरीर मा निकोटीन को कमी बनाउन लागूपदार्थ बुझाउँछ, धूम्रपान अन्त्य। यसलाई प्रभावकारी यस दबाइ को प्रयोग हो? हानिकारक निकोटीन आफ्नो शरीर मा प्रवाह जारी हुनेछ, तर चुरोट मार्फत र शरीर मा एक स्टिकर। को प्याच एक लत परित्याग गर्न मदत गर्छ, तर यो अन्त्य गर्दैन शक्ति र सफलता राख्न मद्दत गर्नेछ। उनले धूम्रपान मा मनोवैज्ञानिक निर्भरता को छुटकारा प्राप्त गर्न मद्दत आवश्यक छ।
को प्याच दिन को समयमा छाला मार्फत शरीर मा समान रूप पतन जो धूम्रपान देखि एक निकोटीन, comprises। यो सामाग्री को एक सानो खुराक शारीरिक निर्भरता कम, निर्मूल गर्न मद्दत गर्छ निकासी लक्षण र शरीर बिस्तारै सुर्ती देखि wean।
एक resolutely छुटकारा गर्न बाहिर सेट गर्दैन भने , खराब बानी उहाँले आफ्नो कार्यहरूको परिणाम संदेह भने, त्यसपछि त्यहाँ घटनाको सफलता मा गणना गर्न केही छ।
धूम्रपान देखि लागू गरिएको प्लास्टर रूपमा? यो शरीर मा एउटा नयाँ ठाउँमा एक पटक एक दिन राखिएको छ, प्रत्येक समय। यसलाई जहाँ बाल विकास, नगण्य छ कमर र घाँटी बीच क्षेत्रमा मा प्याच गोंद गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। को प्याच प्रयोग औषधिको खुराक चुरोट एक व्यक्ति प्रत्येक दिन धूम्रपान संख्या निर्भर गर्नेछ। जो प्रति दिन 10 चुरोट धूम्रपान एक, पहिलो महिना प्रति दिन निकोटीन को 21 मिलीग्राम सुरु गर्न सिफारिस गरिएको छ। अर्को दुई हप्ता खुराक द्वारा आधा कम - 14 मिलीग्राम सम्म, र दुई हप्ता र प्रति दिन7मिलीग्राम अन्तिम गर्न सक्नुहुन्छ। यो निकोटीन को न्यूनतम खुराक छ, धूम्रपान अब प्याच पछि यो आवश्यक छ।
धूम्रपान को एक प्याच केही औषधिहरू जस्तै साइड इफेक्ट र contraindications छ। त्यसैले, यसको प्रयोग एक परिणाम जहाँ यो टाँसियो छ साइट, र अनिद्रा मा छाला जलन हुन सक्छ रूपमा। यो एक बेहोशि औषधि प्रभाव र जलन संग लागूपदार्थ संग उपचार गर्न सकिन्छ देखि कुनै पनि विरोधी भडकाऊ मलम हटाउन।
तपाईंले प्रयोग गर्न सक्दैन निकोटीन पैच रूपमा गर्भवती महिला को लागि, स्थायी, albeit सानो, निकोटीन को रक्त स्तर मा adversely भ्रूण असर गर्न सक्छ।
एक प्याच छ जो अर्को बेफाइदा, यसको मूल्य छ। धेरै धूम्रपान लागि, यो उपचार सुरु गर्न मुख्य तर्क छ। भन्छन्, पैसा को लागि तपाईं चुरोट एक भन्दा बढी प्याक खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो क्षमा गर्नुहोस धूम्रपान को हटाउनु चाहनुहुन्छ नगर्ने कसैलाई खोजिरहेको छ।
खैर, अब हाल धूम्रपान देखि प्लास्टर लागू गर्नेहरूलाई सुन्नुहोस्। अंतर रहन्थ्यो यस औषधीय उत्पादन बारे समीक्षा। उदाहरणका लागि, धूम्रपान मुख्य तपाईं यसलाई प्रयोग गर्ने र गर्न सक्छन् धूम्रपान जारी छ, प्लास्टर को बेफाइदा संकेत गर्छ। अन्त्य खराब बानी पनि प्याच देखि निकोटीन एकदम को शारीरिक इच्छाहरू धूम्रपान गर्न कम भन्न, तर अझै पनि धूम्रपान गर्न मनोवैज्ञानिक इच्छा रहन्छ। तर धेरै सजिलो सामना। साथै, यो घन्टा, अड्केको लागि निकोटीन प्याच धूम्रपान प्रयोग र सबै दिन जाने छैन आवश्यक छ। धूम्रपान देखि प्लास्टर उपचार को sensations कारण छैन, यसलाई पारदर्शी, डाक्टर, बिना औषधि पसल बिना दबाइ बिना छ।
कसरी एक इलेक्ट्रोनिक चुरोट चयन गर्न र आफ्नो स्वास्थ्य कायम राख्न।
चुरोट "समुद्र": माल को वर्णन, आफ्नो प्रकार र मुख्य विशेषताहरु
परियोजना घर99: विशेष स्थान र सुविधाहरु को निर्माण
8 अस्पताल। Rodd 8 Vyhino №। प्रसूति अस्पताल № 8, मास्को
आफ्नै हात संग भित्री लागि रोचक विचार
सिक्ने भूगोल: कहाँ ऊफा गर्न?
18 औं शताब्दीमा शतरंज मेसिनले संसारलाई कसरी मूर्ख बनायो?